Looma sheegin iney iney dib u codsan kareen deggenaansho - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dayuurad u diyaargaroobaysa inay duusho. sawir: Sawirle: Johan Nilsson/TT
Looma sheegin iney iney dib u codsan kareen deggenaansho
Afgaan la tarxiiley iyagoo xaq u lahaa dalab magan-gelyo
La cusbooneeyay onsdag 14 december 2016 kl 12.22
La daabacay onsdag 14 december 2016 kl 10.23
Fiidnimadii isniintii ina dhaaftay oo laga tarxiiley dalka Sweden 11 ruux oo ka soo jeeda dalka Afgaanistaan, iyadoona ay ka soo wareegeen oo keliya shan maalmood kolkii ay wakaaladda socdaalku dib eegis ku sameeysay dhabba-tuska qaabiladda soo-galootiga ka soo jeeda dalkaasi Afgaanistaan.
Hase yeeshee aan qaxootigaa lagu war-gelin isbedelka lagu dabciyay qaabilaadda.
– Kolka xaaladdan laga hadlayo ma ahan mid aan si guud ugu war-gelinno dhammaan dadyoowga diidmada ku heley dalabaadyadooda. Mana jiraaan wax farqiyo ah ee u dhexeeya haddii shakhsiga lagu hayo meel iyo haddii uu xorriyaddiisa haysto oo uu magaalada meel ka deggen yahay. Arrmmaha noocaasi ah waa inuu shakhsiga isagu ka war-qabaa, sida uu sheegay Tommy Harnesk, ahna madaxa xarunta ruumka soo-galootiga Märsta ee wakaaladda socdaalka.
Toddobaadkii ina dhaafay ayay wakaaladda socdaalku is-bedel ku sameeysay habka qaabilaadda soo-galootiga ka soo jeeda dalka Afgaanistaan. Iyadoona maadaama ay ka sii xumaatay xaaladda dalka Afgaanistaan la sahlay sidii ey dadyoowga carrigaa ka soo jeedaa ey Sweden ugu heli kari lahaayeen deggenaansho wixii intaa ka dambeeyey.
Sidoo kale waxaa xitaa dib magan-gelyo u dalban kara dadyoowgii dalabaadyadoodii ku heley diidmada. Kuwaasina waxaa ka mid ah dadyoowga ruumka lagu hayo ee lala sugeyo in dalka laga tarxiilo oo dalkoodii dib loogu celiyo.
Hase yeeshee aan lala socodsiin 11-kii ruux ee maalintii isniinta dalka laga tarxiiley ee loo tarxiilay Afgaanistaan iyo iney suurtagal u lahaayeen iney dib magan-gelyo u dalbadaan.
Siddeed ka mid ah 11-ka ruux ee tarxiilku ku dhacay ayaa dalbaday intii aan dalka laga dhoofin iney jiraan sababo hor-istaagaya tarxiilkooda - verkställighetshinder, hase yeeshee diidmo ku heley laba saacadood dabadood kolkii ey dalabkaasi gudbiyeen.
Sababta ey saddaexda harsani u qaadi waayeen tallaabo middaa la mid ah ayaan illaa hadda caddayn. Hase yeeshee midkoodna kuma aanay war-gelin wakaaladda socdaalku xaaladda cusub ee qaxootiga reer Afgaanistaan ku sugan yihiin.